ezityikitywe Vuka — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
"Uhambo ebhaliweyo incwadi endicinga ukuba wonke umntu oselula kufuneka ukufunda. Ifuthe lakhe uYesu yaye esi sizukulwana iza elikhulu nolucacileyo ngokuba zonke phepha. Andikwazi abalindeli ukubona ifuthe walo myalezo kwi isizukulwana leyo olambileyo injongo. "
- Lecrae, Grammy nokunikwa- ngokuphumelela igcisa @lecrae
"Phakama yincwadi iye eligcina intliziyo inkcubeko yethu. Kwathi kamsinya nje ndakuba wayichola ndandingakwazi ukuyibeka phantsi. Uhambo umngeni ukuba WOKWENENE, kwaye ibonisa indlela ukuphila ubomi bakho omdala ehlabathini namhlanje. Funda Enkulu. "
- Sam I, NFL linebacker, @thesamacho wobuntu
"Uhambo ubhale incwadi ndinqwenela ukuba ndifunde xa ndandiselula. Ifuthe lakhe, ubulumko, nomnqweno umngeni isizukulwana abasebatsha womyoleli ukuba umsebenzi ngokwenza ngokusebenzisa Uhambo kunye nomsebenzi uya kukwenza sonke kaThixo. "
- Kirk Franklin, Grammy ibhaso- ngokuphumelela kunye multi-platinum yokurekhoda igcisa @kirkfranklin
"Ndandikuthanda ukufunda Vuka. amaxesha amaninzi kule ncwadi ndazibona Medi- bachi- phezu amaphepha emva ndandifunda nabo. Ndakhuthazwa, aphefumlelweyo, kwaye umngeni kwindlela eya. Isithethe ulindele ukuba achithe ixesha kodwa uThixo ufuna ukusebenzisa ixesha lethu kuba nefuthe nokuba iminyaka yethu. Le read emangalisayo kwabo bafuna ukusebenzisa ixesha labo ngobulumko wenze umahluko uBukumkani. "
- Zigqibo Justin ngayo, NFL baleka @JForsett
"Kaninzi sithetha malunga nokufuna ukwenza umahluko, kodwa musa okunene Phakama wenze into. buddy yam, Trip Lee, ubhale incwadi eya abase umlilo phantsi isizukulwana wamfundisa ukuba undlela lula. Uyayazi umngeni ukuba 'ukunyuka' kwaye baphile ebalini yokuba uThixo wadala ukuba. Ndiyazi Ndiyakube izindululo kule ncwadi bonke ndiyazi. "
Uyakwazi ukuthenga incwadi entsha Uhambo ngayo, phakama, naphi zithengiswa iincwadi. Banzi Risebook.tv
kelvin masiala kalaluka • EyoMqungu 26, 2015 ngexesha 2:42 pm • impendulo
Innocent • EyoMqungu 26, 2015 ngexesha 2:42 pm • impendulo
WIZEMAN • EyoMqungu 28, 2015 ngexesha 4:11 mna • impendulo
Kemi iDREAM • EyoMqungu 28, 2015 ngexesha 11:47 mna • impendulo
Phil • EyoMdumba 3, 2015 ngexesha 1:01 mna • impendulo
Tireo • EyeKhala 17, 2015 ngexesha 11:01 mna • impendulo